स्टेनलेस stee304 क्लिन्चिंग पेंच / हेक्सागन हेड बोल्ट ss 304 ट्रस हेड बोल्ट - Winrock
घर » फास्टनर स्क्रू » स्टेनलेस stee304 क्लिनचिंग स्क्रू / हेक्सागन हेड बोल्ट ss 304 ट्रस हेड बोल्ट
मोडेल संख्या: तपाईंको आवश्यकताको रूपमा
प्रकार: फ्ल्याट हेड, हेक्सागन हेड
जडान: Hinged बोल्ट
मानक: DIN, GB, ANSI, BSW, JIS, GOST
तातो उपचार: तपाईंको आवश्यकता अनुसार
यातायात प्याकेज: २ --- --- k० किलो / कार्टन, --- 35 --- art० कार्टन / प्यालेट
उत्पत्ति: ज्याian्सु, चीन (मुख्यभूमि)
सामग्री: खिया नलाग्ने
ग्रूव: तपाईंको आवश्यकता अनुसार
मुख्य शैली: तपाईंको आवश्यकता अनुसार
ग्रेड: तपाईंको आवश्यकता अनुसार
विशिष्टता: SGS, आईएसओ 9001
१ chair बर्ष भन्दा बढीको अनुभवको साथ उत्पादन र निर्यात कुर्सी नेल स्क्रू, नट बोल्ट, डण्ड, रिभेट्स, र अन्य फास्टनरमा निर्यात गर्दै। हामीले ISO9001 र SGS प्रमाणपत्र पास गर्यौं जुन अर्जेन्टिना, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, मेक्सिको, जर्मनी, क्यानडा, मलेसिया, ब्राजील, युक्रेन, इजिप्ट, स्पेन, इरान, इन्डोनेशिया, टर्की, इजिप्ट, ओमान, साउदी अरेबियामा कहिले निर्यात गरियो , आदि। हाम्रो उत्पादन क्षमता प्रति हप्ता १० करोड टुक्रा हो। हाम्रो स्थिर राम्रो गुण र फाइदा फैक्ट्री मूल्यको कारणले हामीले चीनको फास्टनर निर्यात गर्ने हिस्सालाई कब्जा गरेका छौं।
हामी तपाईंको लोगो प्रिन्ट गर्न सक्दछौं र तपाईंको अनुरोध अनुसार डिजाइन प्याकिंग बनाउन सक्दछौं।
तातो बिक्रीमा अन्य उत्पादनहरू:
हामी मुख्य रूपमा विभिन्न प्रकारका स्क्रू, नट बोल्ट, डन्डा, रिभेटहरू, र अन्य फास्टनर ड्राईवल स्क्रू, चिपबोर्ड स्क्रू, हेक्स हेड सेल्फ ट्यापिंग / ड्रिलिंग स्क्रू, प्यान हेड, प्यान फ्रेमि head हेड, परिमार्जित ट्रस हेड स्क्रू आदि बनाउँछौं।
Winrock के गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न के गर्नुहुन्छ?
ISO9001 प्रमाणपत्रको साथ फास्टनर निर्माणमा 40० बर्ष भन्दा बढीको अनुभवको रूपमा, हामी कठिनाइ वा समस्याहरू भेट्छौं, र हामी ती सबै तरिकाले समाधान गर्दछौं। Key० बर्षको अनुभवको साथ ISO9001 अनुसार लोकीले एक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली स्थापना गर्‍यो। मापदण्ड कारकहरूमा बनाइयो जसले गुणलाई असर गर्न सक्छ। हाम्रा staff०% कर्मचारीहरू कुशल छन्, र key बर्ष भन्दा बढि लककीमा काम गरिसकेका छन्, कर्मचारीले हप्ताहरूको लागि काम बन्द / बन्दको लागि स्किल क्लास लिनु पर्छ। यी सबै हाम्रो कार्यकर्तालाई कसरी मुद्दालाई रोक्ने र सम्हाल्ने मार्गदर्शन गर्नका लागि हो।
के Winrock ले गैर-मानक वस्तु उत्पादन गर्दछ?
हो, हामी गर्छौं। हाम्रो बिक्री प्रतिनिधिलाई तपाईंको विशिष्टता रेखाचित्र पठाउनुहोस्, तब तपाईं उद्धरण प्राप्त गर्नुहुनेछ।
के Winrock एक प्रकाशित मूल्य सूची छ?
हामीसँग प्रकाशित मूल्य सूची छैन। हाम्रो व्यवसायको बजारमा सँधै उतार-चढ़ाव हुन्छ, जसले मानक मूल्य निर्धारण गर्न कठिन बनाउँछ। हामी तपाईंको बिक्री स्टाफलाई लचिलो हुन दिन्छौं जब यो तपाईंको आवश्यकताहरूको उद्धरणको लागि आउँदछ, यसको मतलब यो हो कि तपाईंलाई आवश्यक पर्ने भन्दा उत्तम मूल्य निर्धारण प्राप्त हुनेछ।
के Winrock छुट छ?
अवश्य। हामी तपाईको ठूलो परिमाणमा छूटको आधार प्रदान गर्न सक्छौं। तर उही समयमा, हामीले माथिको कुरा जस्तै, हामी विश्वास गर्दछौं हाम्रो बिक्री स्टाफले तपाईंलाई सब भन्दा राम्रो मूल्य प्रस्ताव गरेको छ। त्यस तरीकाले तपाईसँग छुट छ, तर ठूलो हुन सक्दैन। जानुहोस् र यसको लागि अन्वेषण गर्नुहोस्।
के Winrock नमूनाहरू प्रदान गर्दछ?
किन होईन, र भण्डार गरिएको नमूनाहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन्। हामी तपाईंलाई के भन्न जाँदैछौं कि एक्सप्रेसको लागि हामीसँग बजेट छैन।
वितरण समय कति हो?
यो तपाइँको अर्डर मात्रा मा निर्भर गर्दछ। यो लगभग २०-40० दिन मानकको लागि हो, non 35-60० दिन गैर-मानकका लागि। यो बिक्री प्रतिनिधि संग जाँच गर्नुहोस्, उनी / उनीले ढुवानीको सही मिति दिनेछ।
भुक्तानी अवधि के हो?
T / T & L / C मनपर्दो भुक्तान अवधि हो। साथै वेस्टर्न-यूनियन कम मूल्य भुक्तानको लागि स्वीकार्य छ, जस्तै नमूनाहरू 'एक्सप्रेस शुल्क।